Nei Jesu akatuka muonde? Discover Online ▷ ➡️
Nei Jesu akatuka muonde?
Nei Jesu akatuka muonde? Vanhu vazhinji vanoshamisika kunzwa kuzadzwa nerudo rwakawanda sekukwanisa kwaiita Jesu tuka muonde kuti uuparadze. Zvisinei, basa rega raIshe rine tsananguro iri pasi izvo zvatinofanira kutsvaga kuti tinzwisise meseji yaro.
En mazwi ese nezviito zvaJesu zvaive nechinangwa, uye paakatuka muonde zvaive zvisina kusiyana. Kubudikidza nechiratidzo ichocho chakareruka akatitumira chisingapfuure icho chatinofanira kudzidza kana tichida kuziva kufunga kwechokwadi kwaMwari. Iwe unoda kuziva kuti chii?
1 Nei Jesu akatuka muonde?: Tsananguro
1.1 1. Avo vanonamata nerutendo vachaona zvishamiso
1.2 2. Avo vasingabereki zvibereko vacharangwa
Nei Jesu akatuka muonde?: Tsananguro
Jesu haana kutuka muonde nekufunga kana kutsamwa, Akazviita tipe chidzidzo cheupenyu. Asi kuti tinzwisise kuti yaive meseji ipi, tinoda kutsanangura yakazara nyaya:
Zuva rakatevera kupinda kwake mukukunda muJerusarema, iye aifamba uye nzara. Akasvika pamuonde waive nemashizha ndokutsvaga vana vake. Zvisinei, haana chaakawana ndokuchituka kuti chisazombobereka michero zvakare. Mangwana acho muonde waoma chose kubva pamidzi nevadzidzi vake vakashamisika nekuti muonde ukapwa pakarepo.
Fume mangwana pavakabuda muBhetani, akanzwa nzara.
Uye achiona ari kure muonde wakanga une mashizha, akaenda kundotarisa kana zvimwe akawana chimwe chinhu mariri; asi paakasvika pauri, haana chaakawana asi mashizha bedzi, nokuti yakanga isiri nguva yamaonde.
Zvino Jesu akati kumuonde: Usatongodya muchero pauri; Uye vadzidzi vake vakazvinzwa.
Mako 11: 12-14
Pasi peichi chiitiko, Jesu Ini ndinotumira mameseji maviri kuvadzidzi vake:
1. Avo vanonamata nerutendo vachaona zvishamiso.
2. Avo vasingabereki zvibereko vacharangwa.
Iye zvino zvaunoziva kuti chikonzero ndechei Jesu akatuka muonde, isu ticha tsanangura imwe neimwe yemeseji kuti iwe unzwisise.
1. Avo vanonamata nerutendo vachaona zvishamiso
Avo vanonamata mukutenda vachaona zvishamiso
Jesu akatiratidza izvozvo chero munhu anotenda muna Mwari uye muShoko rake anokwanisa kuita chero chishamiso. Kwaive kusiri kwekungoratidzira kwesimba rehumwari raaive nako, asi zvakatiratidza nzira yaive yekutevera kuita zvese zvatakaronga kuti tiite nerubatsiro rwaMwari.
Iyi ndima yakapusa inotibatsira kunzwisisa izvozvo Simba rake harigashiwe naiye, asi rinobva pakutenda kwake. Naizvozvo, kuti titevere nzira yake, tinofanirwa kuve nekutenda muna Mwari kupfuura zvimwe zvese.
2. Avo vasingabereki zvibereko vacharangwa
Avo vasingabereki zvibereko vacharangwa
Yakanga isiri nguva yemuonde, asi Jesu aitarisira kuwana maonde. Mimwe mionde inobereka michero kutanga, mwaka usati wasvika. Muonde une mashizha akakura unenge watova nemaonde matema. Muonde wakatukwa naJesu waive nemashizha asi usina michero. Chitarisiko chake chainyengera, airatidzika kunge akura, asi aive asiri.
Akatarisana nemamiriro ezvinhu aya, Jesu akataura mufananidzo wemuonde usina michero:
Mumwe murume akasima muonde mumunda wake wemizambiringa. Zvisinei, muonde wakanga wadyarwa kwemakore matatu uye hauna kubvira wabereka michero. Izvo murimi wemizambiringa akafunga kuti, kana mushure memakore matatu, muonde usati wabereka michero, uri zvirinani kuitema kuitira kuti irege zvakare kuita kuti nyika yainodya isashande.
Zvino wakataura mufananidzo uyu akati: Umwe wakange ane muonde, wakange wakasimwa mumunda wake wemizambiringa; akasvika achitsvaka chibereko kwauri, asi wakashaiwa.
Zvino wakati kumurimi wemunda wemizambiringa: Tarira, makore matatu ndauya kuzotsvaka chibereko pamuonde uyu, ndikashaiwa; cheka icho; Nei zviri kuitawo kuti nyika isashande?
Ruka 13: 5-7
Nemufananidzo uyu, Jesu akatitsanangurira kuti, semuonde, unofanira kubereka michero. Ndokureva, Mwari vanopa imwe nguva, asi munguva pfupi inotevera, avo vasingatendeuke pazvivi zvavo vacharangwa.
Zuva rapamberi pekutuka muonde, Jesu aive apinda muJerusarema, achikurudzirwa nevanhu. Vanhu vaitaridza kunge vakagadzirira kugamuchira Jesu uye nekushandura hupenyu hwavo, asi pasingasviki vhiki, vaida kuti Jesu afe! Vakanga vakaita semuonde watukwa, vaitaridzika kunge vakagadzirira, asi havana kubereka michero. Chitarisiko chake chainyengera.
Vazhinji vakawaridza nguvo dzavo munzira, vamwe vakatema matavi pamiti vakawarira munzira.
Zvino avo vakange vachitungamira nevakange vachitevera vakadanidzira, vachiti: Hosana *! Akaropafadzwa iye anouya muzita raIshe!
! Hwakaropafadzwa ushe hwaBaba vedu Dhavhidhi, hunouya muzita raIshe! Hosana kumusoro-soro!
Mako 11: 8-10
Ani naani anoponeswa naJesu anobereka zvibereko. Hauchengete kuda zvivi uye unoshandura hupenyu hwako. Zvibereko zvaro zvinogona kunge zvakasvibira uye zvidiki, zvakavanzwa pakati pemashizha, asi zviripo. Vamwe vanhu vanogona kuratidzika kunge vachida Jesu, asi vasina kutendeuka nekudaro havarege zvivi.
Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka.
Mateu 3: 8
Rimwe zuva, munhu mumwe nemumwe achatongwa naMwari uye wese asingaratidze michero yehupenyu hwashandurwa naJesu acharangwa. Naizvozvo, mutendi wega wega anofanira kuongorora hupenyu hwake uye oona izvo zvinoda kuchinja. Nebetsero yaJesu, tinogona kubereka michero yakawanda.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba ichi chinyorwa chipfupi chakakubatsira kuti unzwisise sei Jesu akatuka muonde. Tine zvimwe zvakawanda zvinyorwa zvinopindura mibvunzo yemubhaibheri. Semuyenzaniso, sei vachiti Jesu Mwanakomana waDavidi? Kana iwe uchida kuramba uchidzidza dzidziso yebhaibheri nenzira inonakidza, tinokurudzira kuti uenderere mberi nekuvhura Ziva.online.
Ndeupi musiyano uripo pakati peCalvinism neArminianism?
Sei vachidaidza Jesu kuti Mwanakomana waDavidi?